ညီမျှမှုအယူအဆများ(၁) | Colors Rainbow
August 18, 2017 April 23, 2018 admin 622 Views0Comments equality, Kyaw Swar	min read
လွတ်လပ်မှု (Liberty)နဲ့ ညီမျှမှု (Equality) ဆိုတာ လူသားတွေအတွက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အခွင့်အရေးနှစ်ရပ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဒီအယူအဆနှစ်ရပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဒေါက်တိုင်နှစ်ရပ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေက လွတ်လပ်မှုကို ညီမျှမှု၊ ညီရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓာတ် (Fraternity) တို့နဲ့အတူတကွ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ ပြင်သစ်အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာ လူသားတွေကို မွေးဖွားပြီးနောက် သူတို့၏အခွင့်အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်မှုနှင့် ညီမျှမှုတို့ အမြဲ ဆက်လက်ဖြစ်တည်နေသည်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖေါ်ပြထားတယ်။ အိန္ဒိယအခြေခံဥပဒေရဲ့ နိဒါန်းမှာလည်း ညီမျှမှုကို အိန္ဒိယအစိုးရ၏ အခြေခံရည်မှန်းချက်လေးရပ်အနက် တစ်ရပ်အနေဖြင့် ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကတော့ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ညီရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ညီမျှမှု(equality)ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့အယူအဆတစ်ခုပဲလို့ ဆိုရမယ်။ လူတွေအားလုံး အတူတူပဲဆိုတာက ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။ တချို့သော သဘောတရားတွေအရ လူတွေအားလုံး အတူတူပဲဆိုတဲ့ ယူဆချက်ဟာ အတော်လေး အငြင်းပွားဖွယ် ကောင်းပါတယ်။ နာမည်တပ်ပြီးပြောရရင် ပလေတို၊ အရစ္စတိုတယ်လ်၊ ကန့်၊ ဟေဂယ်၊ ရူးဆိုး၊ နစ်ရှေးနဲ့ အမေရိကန်ကို အုတ်မြစ်ချခဲ့သူတွေ (American Founding Fathers) ဟာ ဒီယူဆချက်ကို လက်မခံဘဲ ပယ်ချခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စဉ်းစားကြည့်ရင် လူတွေဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့မတူညီကြတာကို တွေ့ရမှာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ပင်ကိုစွမ််းရည်၊ ရည်မှန်းချက်၊စိတ်ဆန္ဒစတဲ့ အရာတွေမှာ နည်မျိုးစုံနဲ့ကွဲလွဲမှု၊ မတူညီမှုတွေ ရှိနေကြတယ်။ အလားတူပါပဲ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ လူတန်းစား၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းစတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း မတူညီကြပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခေတ်ပြိုင်နိုင်ငံရေး ဒဿနပညာရှင်တွေအပါအဝင် ဒီနေ့ခေတ် လူတွေအနေနဲ့တော့ လူတွေဟာ တချို့သော သဘောတရားတွေအရ အားလုံး အတူတူပဲဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခုအချိန်မှာ ဆုပ်ကိုင်ထားကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ညီမျှမှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လူတစ်ယောက်အဆိုပြုတဲ့အဖြေက လူတွေဟာ အခွင့်အရေးတွေ (rights) ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ တန်းတူညီမျှဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဖြေဟာ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကောက်ချက်ချမှုကြားမှာ ကရွတ်ကင်းလျှောက်လည်နေတဲ့ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုပဲလို့ ဆိုရမယ်။ တကယ်တော့ အခွင့်အရေးတွေဆိုတာကိုက မှန်ကန်ကြောင်း၊ တရားမျှတကြောင်း ပြသဖို့ လိုတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို အခွင့်အရေးတွေကို ညီမျှမှုရှိကြောင်းပြသပြီး တရားမျှတမှုကို ရယူကြရတယ်။ ဒါအပြင် ညီမျှမှုဆိုတာကို တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ (equal rights) ခံစားခွင့်ရတာလို့ နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ သာတူညီမျှအဖြစ်ဆုံး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ (the most egalitarian societies) တောင်မှ ညီမျှမှုကို ချိုးဖေါက်ရာကျနေတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အကြောင်းက လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပါဝင်သူတချို့ (ဥပမာ-ရာဇဝတ်သား တွေ) ကို တခြားသူတွေခံစားရရှိနေတဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတချို့ကို ခံစားခွင့်မပေးတာဟာ သင့်တော်တယ်လို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက ယူဆကြလို့ပဲ။
နောက်ထပ်အဆိုပြုချက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတယ် (rational)၊ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုရှိတဲ့ လူသားတွေဖြစ်တယ် (reasoning beings) ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာပေါ်မှာ ညီမှုမှုကို ရပ်ခံ စဉ်းစားနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ လူတိုင်းဟာ ဒီဖေါ်ပြချက်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ – စာသင်ရခက်ခဲတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ၊ စိတ်မမှန်သူတွေ၊ ဆေးစွဲနေသူတွေဟာ ဆင်ခြင်တုံတရား အပြည့်အဝရှိသူတွေလို့ ဆိုဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုလူတွေကို ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တန်းတူ မဟုတ်ဘူး (unequal)လို့ ဆိုလိုတာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ကောင်းတယ်။ ဒါဖြင့်ရင် စံသတ်မှတ်နိုင်တဲ့၊ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှုရှိတဲ့ ဘယ်လိုသွယ်ဝိုက် ညွှန်းဆိုချက်တွေ နောက်ကပါလာမလဲ။ ပညာသင်ယူဖို့ ခက်ခဲသူတွေကို မဲပေးခွင့် အခွင့်အရေးမပေးဘဲ ငြင်းပယ်သင့်ပါသလား။ အရင်းအမြစ်တွေအပေါ် ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ တောင်းဆိုခွင့်နဲ့ မတူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေ သူတို့မှာ ရှိကြသလား။ အကယ်၍ မရှိဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် မရှိရတာလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
(၁) ညီမျှမှုဆိုတာ အလုံးစုံညီမျှတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ (Equality does not mean absolute equality.)
ယေဘုယျအသုံးအနေနဲ့တော့ ညီမျှမှုဆိုတာကို အားလုံးအတွက် ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ညီမျှမှုနဲ့ အခွင့်အရေးအရာမှာ ညီမှုမှုလို့ ယူတယ်။ ဒါကို သဘာဝညီမျှမှုအနေနဲ့ တောင်းဆိုကြတယ်။ လူတွေအားလုံး သဘာဝအရ လွတ်လပ်စွာ မွေးဖွားခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကို ဆွဲငင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်ပေမယ့် သဘာဝတရားအရ အလုံးစုံညီမျှမှုဆိုတဲ့ အယူအဆအားလုံးကို အပြည့်အဝတော့ လက်မခံနိုင်ကြဘူး။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရုပ်လက္ခဏာသွင်ပြင်အရရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်အရရော မတူညီကြဘူး။ တချို့ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းကြပြီး တချို့က အားနည်းပျော့ညံ့ကြတယ်။ တချို့က တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်သလို တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတာ တွေ့ရမယ်။
လူသားတွေရဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် ဆက်ဆံမှုနဲ့ ချီးမြှောက်မှုတွေမှာ ညီမျှမှုရှိဖို့ရာလည်း မသေချာနိုင်ဘူး။ ဆုလာဘ်ပေး ချီးမြှောက်မှုဆိုတာမျိုးက လူအမျိုးမျိုးရဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာရှိနေတဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပေးအပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ညီမျှမှုဆိုတာ အလုံးစုံ အကြွင်းမဲ့ညီမျှမှု ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။
အမှန်တကယ်တော့ ညီမျှမှုဆိုတာ တိုးတက်မှုအတွက် ညီမျှတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတွေရဲ့ ညီမျှမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ တကယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က ယေဘုယျဆန်ပြီး ဘက်လိုက်မှုမရှိတဲ့ ညီမျှမှုကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်တယ်။ အလုံးစုံ ညီမျှမှုရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ သဘောက အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုတွေမှာ ဘက်လိုက်မှုကင်းရမယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး အားလုံးဟာ ညီတူညီမျှ အကျိုးခံစားရမယ်(ဝါ) ညီတူညီမျှ ထိုက်တန်မှုရှိတယ်လို့ ပြောလိုတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
(၂) ညီမျှမှုဆိုတာ သဘာဝတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး မတရားတဲ့ မညီမျှမှုတွေအားလုံး ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ (Equality means absence of all unnatural and unjust inequalities.)
လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ မညီမျှမှု(inequality) နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
(၁) သဘာဝတရားအရ မညီမျှမှုတွေ (natural unequalities) နဲ့
(၂) သဘာဝတရားအရမဟုတ်ဘဲ လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မညီမျှမှုတွေ(man-made unnatural inequalities) တွေပဲ ဖြစ်တယ်။
သဘာဝတရားအရ မညီမျှမှုတွေဆိုတာ လူသားတွေကြားမှာ သဘာဝတရားအရကို မတူကွဲပြားဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လူသားအားလုံးက မဖြစ်မနေ လက်ခံထားရမယ့် အရာတွေလို့ ဆိုရမယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ သဘာဝတရားအရ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲ လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ မညီမျှမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမညီမျှမှုတွေကတော့ လူမှုရေးအခြေအနေတွေနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ရှိနေရတာပါ။ လူမှုစနစ်တစ်ခု လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေခြင်းကနေ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ မညီမျှမှုအခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ခွဲခြားမှု၊ အသားအရောင်၊ အယူဝါဒ၊ ဘာသာတရား၊ လိင်၊ မွေးဖွားရာ ဒေသတွေအလိုက် မတူညီမှုတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို ကျင့်သုံးတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုအရာတွေအားလုံးဟာ သဘာဝတရားအရ မဟုတ်ဘဲ လူသားတွေ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ မညီမျှမှုတွေပါပဲ။ ညီမျှမှုဆိုတာ အဲ့ဒီမညီမျှမှုတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအားလုံး အဆုံးသတ်သွားတာလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ ညီမျှမှု (Negatively equality) ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တချို့သော လူတွေ၊ တချို့သော လူတန်းစားတွေ ရနေတဲ့ အထူးအခွင့်အရေးတွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေ အားလုံးကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခြင်းလို့ ဆိုရမယ်။ သဘောကတော့ လူတွေ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ မညီမျှမှုတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခြင်းပါပဲ။ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ ညီမျှမှု(Positively Equality) ကတော့ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေး၊ အရင်းအမြစ်တွေကို သာတူညီမျှ ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးရေး၊ တိုးတက်မှုအတွက် ညီမျှတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ၊ လူအမျိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၊ စွမ်းရည်နဲ့အရည်အသွေးတွေကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံပေးခြင်းကြောင့် ရလာမယ့် နှိုင်းရညီမျှမှု (relative equality) တွေအတွက် ရပ်တည်ပေးတယ်။
၁။ ညီမျှမှုဆိုတာ အလုံးစုံညီမျှမှုအတွက် ရပ်တည်မပေးဘူး။ တချို့သော သဘာဝတရားအရ မညီမျှမှုတွေ ရှိနေခြင်းကို လက်ခံတယ်။
၂။ ညီမျှမှုအယူအဆက လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ သဘာဝအရမဟုတ်ဘဲ လူတွေ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ မညီမျှမှုတွေ၊ အထူးအခွင့်အရေးရနေတဲ့ လူတန်းစားတွေ ကင်းမဲ့ဖို့ တောင်းဆိုတယ်။
၃။ ညီမျှမှုက လူသားအားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကို အာမခံချက်ပေးရမယ်၊ ခွင့်ပြုရမယ်လို့ ယူတယ်။
၄။ ညီမျှမှုဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက လူသားတွေအားလုံးအတွက် တူညီပြီး ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရှိတဲ့ စနစ်မျိုးဆိုတာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတယ်။
၅။ ညီမျှမှုဆိုတာ တချို့လူတွေကိုသာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အထူးလိုအပ်ချက်တွေ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအစား လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ညီညီမျှမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုတယ်။
၆။ ညီမျှမှုအယူအဆက ဥစ္စာဓနနဲ့ အရင်းအမြစ် ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုမှာ သာတူညီမျှရှိဖို့နဲ့ တရားမျှတမှုရှိဖို့ ထောက်ခံအားပေးတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုကို တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံး ဖြစ်စေလိုတယ်။
၇။ ညီမျှမှုအယူအဆက လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက အားနည်းတဲ့ ဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရသူတွေကို အကူအညီပေးဖို့အတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အကာအကွယ်ပေးရေး သဘောတရားတွေကို လက်ခံတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးစနစ်မှာ ညီမျှမှုအခွင့်အရေးကို နိုင်ငံသားအားလုံးကို ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဇာတ်ခွဲခြားခံရသူတွေ၊ ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေ၊ လူနည်းစု အုပ်စုတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် သီးသန့်နယ်မြေ သတ်မှတ်ပေးမှုတွေ၊ အထူးပ့ံပိုး အကာအကွယ်ပေးမှုတွေအပေါ် အာမခံပေးတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားတယ်။
အထက်ပါ ဖေါ်ပြချက်တွေအရ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် ညီမျှမှုအယူအဆက အခြေခံလက္ခဏာရပ် သုံးရပ်ကို တောင်းဆိုတာ တွေ့ရမယ်။ အဲ့ဒီလက္ခဏာသုံးရပ်ကတော့
(က) လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အထူးအခွင့်အရေး မရှိစေရေး၊
(ခ) လူသားအားလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ပြည်စုံလုံလောက်ပြီး ညီမျှမှုရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိစေရေးနှင့်
(ဂ) လူသားအားလုံးရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ညီတူညီမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးရေးတို့ ဖြစ်တယ်။
ညီမျှမှုအယူအဆက လူအားလုံးအတွက် ညီမျှတဲ့အခွင့်အလမ်းကို တောင်းဆိုပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရသူတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (protective discrimination) အယူအဆကိုတော့ လက်ခံတယ်
ညီမျှမှုကို အမျိုးအစားခွဲခြားကြည့်ရင် အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစား (၆) မျိုး ခွဲခြားလို့ရတယ်။
(၁) သဘာဝတရားအရ ညီမျှမှု (Natural Equality)
လူတွေဟာ စိတ်လက္ခဏာ၊ ရုပ်လက္ခဏာတွေ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေ မတူကွဲပြားကြပေမယ့် လူသားအားလုံးကို လူသားတွေအဖြစ် တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ အားလုံးဟာ လူသားအားလုံးနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ သဘာဝတရားကပေးတဲ့ လူသားဆိုတဲ့ အထိုင်ပေါ်က ညီမျှမှုအယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) လူမှုရေးညီမျှမှု (Social Equality)
လူမှုရေးညီမျှမှု အယူအဆက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို လက်မခံဘူး။ ဘယ်လို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှ မရှိဘဲ လူသားအားလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ တန်းတူညီမျှဖြစ်စေဖို့ ရပ်ခံစဉ်းစားတယ်။ အထူးသဖြင့်—-
(က) လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဇာတ်ခွဲခြားမှု၊ လူတန်းစားခွဲခြားမှုအရ တချို့သော လူအုပ်စုတွေအပေါ်မှာ အထူးအခွင်အရေးပေးမှုတွေ မရှိဖို့ တောင်းဆိုတယ်။
(ခ) ဇာတ်ခွဲခြားမှု၊ အသားအရောင်၊ အယူဝါဒ၊ ဘာသာတရား၊ လိင်၊ မွေးဖွားရာဒေသတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာမှ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ မလုပ်ဖို့ တားမြစ်တယ်။
(ဂ) ညီမျှမှုအယူအဆက လူမှုရေးအရ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လူသားအားလုံး အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် အခွင့်အရေးကို လက်ခံတယ်။
(ဃ) ညီမျှမှုအယူအဆက လူအားလုံးအတွက် ညီမျှတဲ့အခွင့်အလမ်းကို တောင်းဆိုပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရသူတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (protective discrimination) အယူအဆကိုတော့ လက်ခံတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူမှုရေးညီမျှမှု သဘောတရားရဲ့ ဗဟိုချက်ကို ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းအရာက ကျား-မ လိင် မညီမျှမှု အဆုံးသတ်စေရေး ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ အဆင့်အတန်းအရ ညီမျှမှုရစေဖို့နဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အားလုံးကို ကျား-မ မခွဲခြားဘဲ အသက်ရှင်သန် နေထိုင်ခွင့်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ညီမျှတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရစေရေးတို့ ဖြစ်တယ်။
(၃) ပြည်သူ့အခွင့်အရေး ညီမျှမှု (Civil Equality)
ပြည်သူ့အခွင့်အရေး ညီမျှမှုဆိုတာ လူသားအားလုံးနဲ့ လူမှုအုပ်စုအားလုံးကို တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ ရရှိစေဖို့ ဖြစ်တယ်။ လူသားအားလုံး ဥပဒေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။
(၄) နိုင်ငံရေးညီမျှမှု (Political Equality)
နိုင်ငံရေးညီမျှမှုဆိုတာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ နိုင်ငံသားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို တန်းတူညီမျှ ရရှိရမယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် တူညီတဲ့ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်တွေ ချမှတ်ပြီး တန်းတူညီမျှတဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေကို အာမခံချက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဖြစ်တယ်။
(၅) စီးပွားရေးညီမျှမှု (Economic Equality)
စီးပွားရေးညီမျှမှုဆိုတဲ့သဘောက လူတွေအားလုံး တူညီတဲ့လုပ်ခလစာ၊ တူညီတဲ့ ချီးမြှောက်ခံရမှု၊ တူညီတဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခံရမှု အခွင့်အရေးတွေရဖို့လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအတွက် တရားမျှတပြီး လုံလောက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိစေဖို့ကိုသာ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ တချို့ကသာ လူနည်းစုတွေအပေါ် အထူးလိုအပ်ချက်တွေ ရရှိစေမယ့်အစား လူသားတိုင်းအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးကို တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအယူအဆက ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကို ကျဉ်းနိုင်သမျှ ကျဉ်းမြောင်းစေလိုတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဥစ္စာဓနနဲ့ အရင်းအမြစ် ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုတွေဟာ သာတူညီမျှ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။
(၆) ဥပဒေရေးရာညီမျှမှု (Legal Equality)
ဥပဒေရေးရာညီမျှမှု အယူအဆက ဥပဒေရှေ့မှောက်မှာ ညီမျှမှုရဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ တူညီတဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ အားလုံးတူညီတဲ့ တရားစီရင်မှုကို ခံစားရဖို့၊ သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ လွတ်လပ်မှုတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ရဖို့ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေ ရှိရမယ်လို့ ယူဆတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ ရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတဲ့ တရားစီရင်ရေးကို လိုလားတယ်။
← လိင်တူနှစ်ခြိုက်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်အဘိဓာန် အပိုင်း (၃)
ကျွန်တော်သာ Gay တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရင် →
ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် (Right of Private Defence)